Fanatanjahantena : betsaka ny asa goavana miandry an’i Faratiana Eugène | NewsMada
Fanatanjahantena : betsaka ny asa goavana miandry an’i Faratiana Eugène
Handimby ny minisitra, Andriamosarisoa Jean Anicet, eo amin’ny fitantanana ny minisiteran’ny tanora sy ny fanatanjahantena, manomboka izao, i Tsihoara Faratiana Eugène. Sekretera jeneralin’ny governemanta, teo aloha, ny tenany. Olona nivoaka avy amin’ny Oniversite tsy miankina INSCAE, ary nanaraka ny lalam-piofanana, momba ny fambolena sy ny fiompiana, ity minisitra vaovao, ity. Tsy vaovao amin’ny tontolon’ny fanatanjahantena izy, satria efa mpilalao handball, ary efa nitondra klioba sy taranjam-panatanjahantena hafa. Betsaka ny andraikitra miandry azy, amin’izao fitantanana ny minisiteran’ny fanatanjahantena izao, izay misy federasiona miisa 30. Anisan’ny asa goavana miandry azy, ny mahakasika ny fifidianana eo anivon’ny federasiona malagasin’ny taranja baolina kitra (FMF).
Eo koa anefa ireo fandaharan-dalao iraisam-pirenena, miandry ny atleta malagasy. Anisan’ireny, ny lalao afrikanina, ho an’ny tanora, hatao any Alger, ny volana jolay, ho avy izao. Aorian’io, ny lalao olympika ho an’ny tanora, hatao any Buenos-Aires, Arzantina, ny volana oktobra 2018.
Tsiahivina, fa anisan’ny asa efa tontosan’ny minisitra Jean Anicet, tao anatin’ny efa-taona, nitantanany, ny fankatovana ny politikam-pirenena, ho an’ny tanora (PNJ) sy ny nahavitana ireo fotodrafitrasa, samihafa.